Posted by ညီနေမင်း on 12:57 AM with4comments
မေး pyaephyoe007@gmail.comးကျွန်တော် photo တွေကို စနစ်တကျသိမ်းချင်ပါတယ်၊ File အလိုက်ခွဲထားချင်တယ်၊ ဒါကတော့ Family, ဒါကတော့ Own photo, photo တစ်ခု ရဲ့ ဆိုက်တွေ၊ အကြောင်းအရာတွေကို ရေးသွင်းပြီး သိမ်းထားချင်ပါတယ်။ နောက်ပြီး စနစ်တကျ သိမ်းထားတာကို အချိန်တွေ၊ ရက်တွေ၊ နေ့တွေ၊ ကြောင်းအရာတွေ၊ ပုံရဲ့ caption တွေ၊ ကို လိုက်ပြီး ပြန်ရှာပေးနိုင်တဲ့ software လေလို့ချင်လို့ပါ ..
အင်း လိုချင်တဲ့သူကတော့ တောင်းလိုက်တာပဲ ရှာလိုက်ရတာ ညနေကတည်းက အခုမှ လိုချင်တာကို ရတာပဲ photo database software ဖြစ်ဖို့ အချက်အလက်တွေကို ရေးတဲ့ function ပါဖို့ License version ဖြစ်ဖို့ အောင်မယ်လေးလေး မနည်းရှာလိုက်ရတယ် ခါးပါကိုင်းသွားတယ် ဒီတစ်ခါတော့ ကဲကိုပြည့်ဖြိုးရေ သုံးနည်းကိုတော့ မပြောပြနိုင်တော့ဘူးဗျာ ဒီနေ့အတွက်ကတော့ ကိုယ့်ဟာကို စမ်းလိုက်ပါ ကျွန်တော် စမ်းပြီးပါပြီ အရမ်းလွယ်ပါတယ်. ရှင်းလဲရှင်းတယ်. အဆင်ပြေမယ်လို့ မျှော်လင့်ပါတယ်. တစ်ခြားသူများလဲ မိမိရဲ့ ဓါတ်ပုံတွေကို ရက်စွဲအလိုက်. အကြောင်းအရောများကို တစ်ပုံချင်းစီ detail သတ်မှတ်ပြီးရေးလို့ရပါတယ်. လိုင်စင်ဗားရှင်းပါ . လိုချင်တဲ့သူများ အောက်မှာ Download လုပ်လိုက်ပါ. နောက်အားတဲ့အခါကျမှ ဒီ sofware ကို ဘယ်လို သုံးရတယ်ဆိုတာ အသေးစိတ် ရှင်းပြပေးပါ့မယ်. ဒီနေ့တော့ မတတ်နိုင်တော့ဘူး . ဒီ software ရှာတာနဲ့တင် အချိန်ကုန်သွားတယ်. Download mirrorcreator | mediafire | zshare | ziddu
William Jason PunkSeptember 21, 2011 at 12:16 PMကျေးဇူးပဲ...☺♥☺♥☺ReplyDeletezinyawneSeptember 28, 2011 at 3:28 PMcrack fileကသုံးလို့မရဘူးအစ်ကိုပြန်တင်ပေးပါဦးReplyDeletezinyawneSeptember 28, 2011 at 3:33 PMcrack fileလေးပြန်တင်ပေးပါသုံးမရလို့ပါ။ReplyDeleteLa NaungDecember 1, 2013 at 8:29 PMူlinks သေ နေတယ်.....ကျေးဇူးပြု ထက်တင်ပေးပါReplyDeleteAdd commentLoad more...